Redmi Xusuusin 9 wuxuu ku heli karaa nooc kale shaashadda 120 Hz | Androidsis
Xiaomi waxay umuuqataa inay diyaarinayso noocyo caan ah Redmi Note 9 oo leh 120 Hz bandhiga heerka cusboonaysiinta. Waqtigan xaadirka ah, taleefanka ayaa noqon doona nooc heer sare ah, sida ku cad xoqitaankii ugu dambeeyay. Waxaan horeyba uheysanay astaamo iyo qeexitaano farsamo oo kan ah, laakiin, kahor intaan la sii wadin, waxaa xusid mudan inay ku yimaadaan qaab xan ah.
Ma jiraan xog badan oo hadda ka jirta qalabkan. Si kastaba ha noqotee, waxaa la sheegay in shaashadda 120 Hz aysan noqon doonin waxa kaliya ee ku cusub noockan; sida muuqata tusaalooyinka kale way fiicnaan doonaan sidoo kale.
Maxaa laga yidhi 'Redmi Note 9 High-end'
Marka hore, marka lagu daro shaashadda heerka cusbooneysiinta, waxaan muujineynaa tikniyoolajiyadeeda, oo aan AMOLED noqon doonin. Shirkaddu waxay qorsheyneysaa inay ku bixiso guddi IPS LCD ah qalabkan. Xalka shaashadda, dhanka kale, wuxuu noqon lahaa FullHD + oo ah 2.400 x 1.080 pixels.
Laga soo bilaabo Gizmochina Waxay ku andacoodaan in heerka cusbooneysiintu uu ku kala duwanaan doono 30Hz ilaa 120Hz. Tan macnaheedu waxa weeye in shaashadda taleefanka casriga ahi ay si otomaatig ah u beddelayso heerar kala duwan oo cusbooneysiin ah, iyadoo ku xidhan hadba hawsha gacanta lagu hayo. Ciyaaraha muuqda ee leh shaashadda shaashadda oo ku soconaya heerka cusbooneysiinta 120Hz, halka tallaabooyinka sida daawashada filimada loo dhimi karo 60Hz ama 30Hz si loo badbaadiyo nolosha batteriga.
Taleefanka casriga ah ayaa sidoo kale la filayaa inuu haysto batari awood leh oo dhan 4.800 Mah. Aaladda ayaa sidoo kale taageeri doonta xawaaraha xawaareynta fiilooyinka ee illaa 33 W.
Tilmaamo kale ayaa sheegaya in cabirka shaashadu waa 6.67 inji iyo in dhalaalka ugu badan ee kani uu noqon doono qiyaastii 450 nits. Waxaa sidoo kale la tilmaamay inay imaaneyso iyadoo lagu daboolay muraayad Gorilla Glass 5 oo iska caabin ah oo ka socota Corning si ay ula kulanto xoqitaanno, kuuskuusyo iyo noocyo kale oo xadgudub ah. Sidoo kale, waxaa jiri kara dareemayaal afar geesood ah oo uu hogaaminayo 2 MP Samsung ISOCELL HM108 lens-ka ugu weyn.
Wadada buuxda ee maqaalka: Androidsis » Noticias » Redmi Xusuusin 9 wuxuu ku heli karaa nooc kala duwanaansho 120 Hz ah